Soloy ny resadresaka ataonao Reps Sales amin'ny resaka mivantana | Martech Zone
Sasao amin'ny resadresaka mivantana ny hetsika fanaovan-gazety ataon'ny Reps Sales
Talata, Septambra 22, 2015 Jenn Lisak Golding
Manakatona telefaona mihazona tanana an-tanana ambadika maitso
Nandritra ny am-polony taona maro, fiantsoana mangatsiaka no fototry ny fisian'ny ankamaroan'ny mpivarotra, izay mandany ora maro hanandrana olona iray amin'ny telefaona nefa tsy tafaverina intsony. Izany tsy mahomby, sarotra ary matetika tsy ampoizina. Na izany aza, satria misy ny fifandraisana mivantana eo amin'ny habetsaky ny varotra ivelany sy ny tahan'ny fivarotana mihidy iray ekipa, ny fiantsoana mangatsiaka dia zava-dratsy ho an'ny ekipa mpivarotra ivelany na anatiny.
Mazava ho azy, ny mpivarotra dia tsy afaka miantehitra amin'ny tambajotra efa ananan'izy ireo hitarika izany varotra izany, ary mila misy ny fomba iray ahafahan'izy ireo miditra amin'ny tsena tsy azo ampiasaina na ireo dobo manantena. Saingy, toy ny asa rehetra, misy hetsika izay tokony handaniam-potoana ny mpitondra varotrao ary ny hafa izay tsy fampiasana tsara ny fotoanany.
Ireo mpiorina amin'ny antso mangatsiaka
Na dia ilaina ratsy aza ny fiantsoana mangatsiaka amin'ny fizotry ny varotra, tsy midika izany fa tokony hikirakira ny lafiny rehetra amin'izany ireo mpiasan'ny varotrao. Misy singa telo amin'ny fiantsoana mangatsiaka:
Lisitra Famoronana: Tafiditra ao anatin'izany ny fanangonana, fanamarinana ary fanadiovana ny lisitry ny vinavinam-bidy ho an'ireo solontenan'ny mpivarotra any ivelany hantsoinao.
telefaonina: Ny tena hetsika fampiantsoana antso, izay misy ny fiatrehana ny bitsika amin'ny telefaona, ny firesahana amin'ireo mpiandry vavahady ary ny fitetezana rafitra mandeha ho azy.
famaranana: Ity singa ity dia miompana amin'ny fampiasana le resaka mivantana miaraka amin'ny fanantenana hanentanana ny fividianana.
Amin'ireto singa telo ireto dia mazava ny hetsika lehibe indrindra tokony hataon'ny mpivarotra ivelany na ao anatiny famaranana.
Miala amin'ny resaka momba ny lisitry ny vinavina, ny fanaovana antso an-tariby dia iray amin'ireo hetsika tsy mahomby indrindra ho an'ireo solo-barotra. Eritrereto ny habetsaky ny fotoana lanin'izy ireo amin'ny fiantsoana sy ny fanoratana isa raha afaka mifantoka amin'ny zavatra tsara vitany izy ireo: fivarotana ny vokatrao na tolotra serivisinao.
Raha ny marina dia mitaky antso 21, amin'ny salan'isa, raha te hiteraka resadresaka mivantana iray, ary ny mpiasan'ny varotra dia manao antso 47 eo ho eo isan'andro fotsiny.
Betsaka ny famokarana very amin'ny fananana ny tompon'andraikitra amin'ny varotrao ho tompon'andraikitra amin'ny antso an-telefaona sy ny fitetezana ireo telefaona finday tsy misy farany. Ahoana raha tsy mila miantso dial akory ny mpiasan'ny varotrao nefa mbola nomena resaka mivantana?
Inona ny atao hoe Team Dialing?
Tsy takona afenina fa orinasa maro no mamoaka lahasa isan-karazany amin'ny orinasan-dry zareo, koa maninona no tsy hitovizany ny fanaovana antso?
Antsoy ekipa manome ekipa fivarotana miaraka amin'ireo mpiantso miantso izay mampifandray ireo solo-varotrao amin'ireo mpanapa-kevitra amin'ny fotoana tena izy, tsy mila miantso. Izany hafa noho ny fanendrena amin'ireny mpiasa ireny dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fianarana momba ny vokatrao na serivisinao; tompon'andraikitra tsotra amin'ny firesahana amin'ireo mpiandry vavahady izy ireo, fitetezana ireo bitsika an-telefaona ireo, sns. mba hahafahan'izy ireo mampifandray mivantana ny solo-sainao amin'ny mpanapa-kevitra, manome resaka mivantana miaraka amin'ny fanantenana.
Ny fampiantsoana ekipa dia sarotra, haingana sy mora, sady manome tombony azo tsapain-tanana ihany koa. Raha toa ka tsy afaka mifandray amin'ny mpanapa-kevitra ny mpandraharaha fisoratana anarana dia mifindra amin'ny iray hafa izy ireo raha ny mpivarotra anao kosa dia voatonona fotsiny rehefa vonona ny resaka mivantana. Misy valiny mazava, miaraka amin'ny fahitana ny isan'ny antso natao, ny isan'ny resaka nifanaovana sy ny tahan'ny fifandraisana.
Sasao amin'ny resaka mivantana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny a serivisy fanaovana diabe ekipa. MonsterConnect, mpanohana anay vaovao indrindra, dia manome antso 150-200 sy resadresaka mivantana 8-12 miaraka amin'ireo mpanapa-kevitra isan'ora, manome valiny 40 heny tsara kokoa sy fifanarahana mihidy kokoa.
Mangataha fanombanana maimaimpoana na fampisehoana demo an'ny serivisy antso an'ny ekipa MonsterConnect anio:
Fanombanana maimaim-poana ny Prospecting Mangataha Demo
Tsy mandeha ho azy ny personalization
Tatitra momba ny fitondran-tena ao amin'ny Google Analytics: Mahasoa kokoa noho izay tsapanao!